Ukuhamba kweposi: Yongeza ii-Autoresponders kwaye usebenze ngokuLandelelana kwe-imeyile | Martech Zone
Ukuhamba kwemeyile: Yongeza ii-Autoresponders kwaye usebenze ngokuLandelanayo nge-imeyile
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, 2015 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, 2015 Douglas Karr
Enye yeenkampani yayineqonga apho ukugcinwa kwabathengi kwakubotshelelwe ngqo ekusebenziseni iqonga. Ukubeka nje, abathengi abayisebenzisileyo baphumelele kakhulu. Abaxhasi abasokolayo bashiya. Ayisiyonto ingaqhelekanga ngayo nayiphi na imveliso okanye inkonzo.
Ngenxa yoko, siphuhlise uthotho lwee-imeyile ezifundise kwaye zamkrokrela umthengi ukuba aqalise ukusebenzisa iqonga. Sibanike indlela-yevidiyo kunye nenani leembono malunga nendlela yokuyisebenzisa. Ngokukhawuleza sabona ukwanda kokusetyenziswa, okukhokelele kwiziphumo, ezikhokelele ekugcineni kugcino lwabathengi olungcono. Silwenzile ngokwethu uthotho njengomphenduli ozenzekelayo xa iqonga lomthengi selilungile kwaye sele begqibile ngoqeqesho.
Ngenxa yokuba ii-imeyile bezizenzekelayo, bekukho iindleko ezincinci ekuphuhliseni inkqubo. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba sifuna ukuchitha imali eninzi ngexesha lophuhliso, ukudityaniswa kunye nokuzenzekelayo okubangelwe kukuhamba kwe-imeyile kuye kwafuneka kwenziwe kusetyenziswa iqonga elikhulu.
Ukuhamba kweposi liqonga elakhelwe ngokukodwa umsebenzisi wokugqibela wokutsala kunye nokulahla ukulandelelana kwe-imeyile ekusebenzeni.
Iimpawu zokuhamba kweposi zibandakanya
into yokuZenzekelayo -Yakha ulandelelwano olufana nokuhamba kweefayile ngokuchofoza nje okumbalwa. Imephu yonke yemikhankaso ngokubonakalayo.
Ujoliso -Misa ukucinga ngamacandelo kwaye uqale ukucinga ngabantu ukuze imiyalezo yakho ibe yeyakho ngokwenyani.
Isikhathi -Thumela imikhankaso yakho xa abaphenduli beyeyona mpendulo yabo, ngaphaya kwexesha losuku kwaye kusekwe kwindlela yokuziphatha eyiyo.
WordPress -Dibanisa indawo yakho yeWordPress ngemizuzwana ukwenza iifom zesiko kunye nabasebenzisi bethegi ngokusekwe kwizenzo ezenziwa kwisiza.
Uhlalutyo -Sukulinda de kube kugqityiwe- bona eyona nto isebenza njengoko isenzeka kwaye uhlengahlengise amaphulo akho kubhabho.
Unxibelelaniso -Igcweleyo API kunye nenkxaso yokwakha ukudityaniswa kwesiko. Kwaye ngaphezulu kokudityaniswa okunokwenzeka okungama-400 ngeZapier.
Iiprofayili zomthumeli -Ukulawula abathengi abaninzi, amaphulo kunye nabathumeli bonke abasuka kwiakhawunti enye kunye nokutshintsha okutshisayo ngaphakathi kwemikhankaso.
UkuThengisa -Funda ngakumbi ngabantu ababaphulaphuli bakho ngokusekwe kwizenzo abazenzayo kwimikhankaso nakwi-Intanethi.
Iindawo zamaxesha -Cwangcisa imimandla yamaxesha kwinqanaba lendawo, ukuze ukwazi ukuthumela iphulo ngalinye ngexesha elifanelekileyo losuku.
I-API epheleleyo Ukuhamba kweposi kwakhiwe ukusuka kwifayile ye- API phezulu. Yonke inkonzo iyabaleka API neyakho inako.
tags: Imikhankaso yedriphuUhlalutyo lwe-imeyilei-imeyile apii-imeyile ezenzekelayoimeyile ye-wordpressukuhlanganiswa kwe-imeyileUkunika ingxelo nge-imeyileUlandelelwano lwe-imeyileUkujolisa kwi-imeyileixesha le-imeyileukuhamba kwe-imeyileUkuhamba kweposiukuzenzekela ngokuzenzekelayoIiprofayili zomthumeliamaxesha amaxeshaWordPressImeyile yamagamazapier
I-Twitter Basics: Ungayisebenzisa njani i-Twitter (yabaQalayo)
Umnxibelelanisi weTelePrompter: Umnxibelelanisi weTekhnoloji yakho ekwi-Intanethi